Basket N1A-NDF : Mazava ny fidinan’ny Caf sy SBC ary Dream Team
Ny Sportinga avy any Diana izany no isan’ireo « Bekotro maro olatra » eo amin’ny sokajy N1A amin’izao.
Samy efa mitady hevitra ny hiakarany avy any amin’ny sokajy N1B taorian’ny nialan’ny Shooting an-daharana tamin’ny lalao mandroso tany Mahajanga izy ireo. Omaly dia niondrika teo anatrehan’ny Sebam indray ny Dream Team tamin’ny lalao farany ho an’ny tontolo andro. Isan’ireo nampiakatra tampoka ny herijika ho an’ny Sporting ny fandresena azon’izy ireo nanoloana ny Cosfa.
Ho an’ny vehivavy indray dia efa voafaritra ny fandaharan-dalao ho an’ny ampahavalon-dalana.